Ụbọchị My Pet » Ihe na-eme na mbụ Ụbọchị Site Zodiac Ama
emelitere ikpeazụ: Jul. 06 2020 | 5 min agụ
Mbụ ụbọchị na-mgbe akwara-egwu maka a dịgasị iche iche nke ihe. Ị na-enwe obi ụtọ na ha nwere ụbọchị, na ohere nke ihe dị na-abịa, ma echegbula onwe gị banyere-eme a mmetụta ọma. Nkebi nke na-eme ezi echiche pụtara na-eme atụmatụ a ụbọchị na onye nke ọzọ ga-enwe, ma olee otú ị pụrụ ime na mgbe ị na-amaghị banyere ha ọtụtụ ma? Ọ bụrụ na ị maara ha Zodiac ịrịba ama, agbalị tinye n'ọrụ na-enyere gị aka atụmatụ ahụ zuru okè ụbọchị. Gụọ on:
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na Aries, jide n'aka na ọ na-aga na-rụsiri. Otu Aries ike iguzo ọdụ ka n'ihi nnọọ ogologo, na kwesịrị ka a na-eme ihe mgbe niile. Ime a siri ike ọrụ n'èzí, dị ka hiking ma ọ bụ biking, nwere ike na-arụ ọrụ maka ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ nọrọ n'ime ụlọ, na-agbalị ime ụlọ nkume rịa. Jide n'aka na ị na-aga site otu akụkụ nke ụbọchị na-esonụ ngwa ngwa na-enweghị okodu oge dị ukwuu n'ụzọ na-aga ma ọ bụ na onye ọ bụla n'ime ebe ma ọ bụ na ha ga-atụfu mmasị ngwa ngwa – tupu ụbọchị bụ ọbụna n'elu!
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Taurus, mara na ha na ihe ịrịba ama na-achị uche ziri ezi, otú eme ihe ọ bụla nke ga-ekere òkè ha nwee uche ziri ezi na-arụ ọrụ kasị mma. Gaa a mma ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọgaranya oriri, ịga a wine akatabi okop, imefu abalị egwú, ma ọ bụ ịga egwu nkiri. Ebe ọ bụla ị na-aga, -adị njikere na-emefu ego n'ihi na Taurus hụrụ okomoko. Ịbụ onye ụwa ịrịba ama, ha adịghị cheta inwe a mma picnic n'èzí dị ka ogologo oge n'ebe na-adịghị a otutu chinchi gburugburu, ma ọ bụrụ na ị na-aga na-aga, eweta ụfọdụ citronella kandụl.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Gemini, na-ha ebe jụụ, ukporo, ebe e nwere ọtụtụ ndị na gburugburu na-ha uche kpaliri, na ebe i nwere ike inwe mkparịta ụka na;. Nọgidenụ na-isiokwu ìhè na mpịakọta na ya mgbe ha ngwa ngwa ịgbanwe achị. Ha anaghị echetara ebe ọ bụla na nke ahụ bụ oké ụzụ ma ọ bụ n'ezie-arụsi ọrụ ike, dị ka a osisi, na n'ezie dị ka. Ha pụrụ ikwu na ha na-amasị adventurous ihe, ma ihe ịrịba ama a na-eche na ha na ndị ọzọ adventurous karịa ha dị n'ezie, n'ihi ya, anaghị ewe ha anya na mpụga nke nkasi obi ha mpaghara.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Cancer, ka ha ebe ahụ bụ maara ha, ebe ị maara na ha na na na tupu. Ha kwesịrị maara gburugburu na-eme ka ha chee na ha ala ekwe ka ha na-emepere gị. A jụụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ yiri gị mma nzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-eje ozi nkasi obi nri na nwere ndina kama ike oche. Gwa odibo ghara inye unu abụọ ukwuu n'ihi ya, ha nwere ọtụtụ oge na-ọma na ị, na abụọ nke ị nwere ike ijikọ n'ụzọ mmetụta uche.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Leo, nke a bụ ihe ịrịba ama na hụrụ ejije, otú na-agbalị aga a fim ma ọ bụ ihe nkiri. Ọ bụrụ na ị na-aga na fim, jide n'aka na ọ bụ ihe ọhụrụ kpatụ aka gaa na a kpakpando, na ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ihe nkiri, jide n'aka na ọ bụ kacha ekpo ọkụ ugbu show si n'ebe ugbu a. Ha na-amasị na-eche na na na ìgwè mmadụ, ahụ n'ebe ọ bụla ị na-aga, eme ka ọ na-ekpo ọkụ ntụpọ. Ọ bụrụ na ha na-na na ibu flirty na ọ bụghị naanị gị, ma onye ọ bụla ị na-abịa na kọntaktị na, na-eche na-egosi a obere ekworo. Ha na-amasị na.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Virgo, na-adịghị eme ihe ọ bụla buru oke ibu ma ọ bụ flashy, na adịghị ha n'ebe ọ bụla oké ụzụ ma ọ bụ ọrụ n'aka. Mee ya ka ọ dị jụụ, ebe ha nwere ike na-anụ ha na-eche. Ha na-nnọọ irè, na ike adịghị enweta ya ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla flamboyant, n'agbanyeghị otú ihunanya ị na-eche na ọ bụ. Virgo bụ ihe ịrịba ama nke ike, otú agbalị a ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eje ozi ahụ ike oriri, ma ọ bụ na-aga na-amụ ya na ha. Jide n'aka na ị jụrụ ha obi erughị ala ngwa ngwa, karịsịa banyere ozu ha, otú akwụ ha ụfọdụ siri ike Ekele.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Libra, na-ha ka ha na-nkà ihe ngosi nka, nkà gallery, ma ọ bụ nkà ihe ngosi. Nke a bụ ihe ịrịba ama na-enwe ekele maka nkà okwu ndị kasị. I nwere ike ime ihe nka na ha, ka na-aga a ite iko ma ọ bụ na a glassblowing studio. Ha ga-enwe omume nke na-eke ihe na ị. I nwekwara ike na-agbalị na-aga Kacha ọhụrụ, trendiest ntụpọ na obodo, ma ọ bụ a ụlọ oriri na ọṅụṅụ, osisi, ma ọ bụ ogige. Libras dị ka otu onye-na-otu anya, N'ihi ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-gburugburu ndị, na-anya gị na ha.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Scorpio, arapara ebe na ọchịchịrị ọkụ. Ha na-dọtara na ọchịchịrị, ya mere, ọ ụbọchị ụbọchị. Ha nwere ike ịbụ n'abalị ikwiikwii kwa, otú na-eche na-amalite ụbọchị mbubreyo. Ha na-amasị sayensị, otú i nwere ike na-agbalị a sayensị ngosi nka, karịsịa mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na esiwo na ha nwere ike ịbụ nnọọ nanị gị na. Ha na-amasị darker n'akụkụ nke ndụ na taboo achị, ma ọ bụrụ na ị pụrụ ime ha ebe na-emeso mmekọahụ, ọnwụ, ma ọ bụ ọbara na ikike idi, na ha ga-eleghị anya squeal na-eji ọṅụ.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Sagittarius, -emeghe ka njem. Nke a na-ịrịba ama hụrụ n'anya na-eme ihe na a whim, otú ọ bụla ị na-eme atụmatụ eleghị anya ga-agaghị eme. Ị ga-amalite si dịkwa mma, ma mgbe ahụ gharazie ọzọ, otú tụgharịa ya. Sagittarius hụrụ ndị ọzọ na mba, n'ihi ya, ha na-ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eje ozi osisi nri, ma ọ bụrụ na ị pụrụ a njem, na-eme ya. Ma ọ bụ dị nso na ị na-anọ a awa ole na ole, ma ọ bụ na ị hop na a ụgbọelu na-agafe otu oké osimiri, ha na maka ịnyịnya. Ihe oké nwekwara ike na-arụ ọrụ, dị ka mwụpụ.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a nhiwe Capricorn, mee ya ka ọ dị ka omenala dị ka ị pụrụ. Nri abalị na a nkiri bụ a-na na na na ihe ịrịba ama a. Ha na-adịghị amasị a kewapụrụ n'èzí nke nkasi obi ha mpaghara, ma na-achọ ime ihe ha mabu ama ọma. Arapara ihe nkịtị maka ha ma na-anọ n'ebe crazy. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa ha a nri abalị otu ebe nza nke ọma, mkpa ndị mmadụ ga-, na Aga akara gị ụfọdụ oké ihe. Ha hụrụ n'anya na-hobnob na ndị mmadụ elu n'ọkwá.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na Aquarius, mee ya ka ọ dị ka unconventional ka i nwere ike. Nke a na-ịrịba ama hụrụ ihe ndị na-adịghị ahụkebe na dị iche iche si ihe ọ bụla ha ga-ejikarị eme, otú inupụ dị n'èzí nke gị nkasi obi mpaghara dị ka ị pụrụ. Ha na-na na-ala otu ìgwè ụbọchị, ukwuu n'ime ha n'ihi na ha chọrọ ịbụ ndị enyi gị na mbụ ha na-agbalị idebe ya nkịtị. Gaa ebe na-eco-enyi na enyi, nnukwu on imegharị ihe maka, ma ọ bụ ebe i nwere ike ime ụfọdụ akwalite ọdịmma ndị mmadụ ọrụ ọnụ, dị ka atụtụ-awụba n'oké osimiri, n'afọ ofufo na a ofe kichin, ma ọ bụ na-aga a ebere nri abalị.
Ọ bụrụ na ị na-aga na a ụbọchị na a Pisces, mara na ihe ịrịba ama a bụ ibu ihunanya, eleghị anya karịa ihe ọ bụla ọzọ, ya mere ha Aga ịghọta ọ bụla sappy mmegharị. A ihunanya nri abalị ebe ị na-serenaded na a eriri quartet esokwa gị maka ije na osimiri bụ ihe ha ga-amasị. Pisces eme n'anya mmiri, otú i nwere ike na-aga ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ị ga-enwe mmiri echiche. Ha na-n'anya music, otú agbalị a egwu, na nchịkọta egwu, ma ọ bụ gaa na-agba egwú. Ha n'ezie dị chọrọ ịbụ unu nso. Oddball nhọrọ? The n'ogige ụmụ anụmanụ. Ha hụrụ ụmụ anụmanụ.